केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने कसैको तागत छैन, उनी सर्वेसर्वा भए : डा. दिक्षित - Himali Patrika
केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने कसैको तागत छैन, उनी सर्वेसर्वा भए : डा. दिक्षित
हिमाली पत्रिका १६ साउन २०७७, 10:09 am
नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दिक्षितले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प नै नभएको दाबी गरेका छन् । उनले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पनि ओलीलाई हटाउन नसक्ने ठोकुवा गरे । शुक्रबार विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रस्तुत छ डा. दिक्षितसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
के छ हालखबर, देश कता जाँदैछ ? कोरोना त महामारीको रूपमा आयो होईन ?
थपिँदैछ । सबै त्यहाँ अन्यौल भईरहेको छ ।
कसरी अन्यौल भयो ?
यहाँ न्याय कानुनको अचम्म कुरा भईरहेको छ ।
न्याय र कानुनको कुरा गर्दा हामी कहाँ चुक्यौँ ? हाम्रो देशमा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति जनताले गर्न पाएनन् ?
निर्मला ह’त्याका’ण्ड आजमात्र समाचार आएको छ नि, त्यसले मलाई त अचम्म लाग्यो । यसरी एस.पी.ले भनेर न्याय पायो, निर्मलालाई न्याय भएन । यो मुद्दा तल्लो अदालतमा छोड्नुहुँदैन् ।
कञ्चनपुरको जिल्ला अदालतले सफाई दियो प्रहरीलाई ?
मुद्दा त्यहाँ छोड्नुहुँदैन् । यसलाइ माथि अदालतमा ल्याउनुपर्छ । त्यहाँ लोकल ठाउँ छ । मुद्दालाई लोकल ठाउँमा छोड्नुहुँदैन । आखिरमा सर्वोच्चमा पु¥याउनुपर्छ । छोड्न त मिल्दै मिल्दैन । कुनै पनि हालतमा ८ जना निर्दोष हुनै सक्दैनन् । यत्रो ज’घन्य ह’त्या भएको छ । यसरी क्लिन सफेद दिनु, यति पनि शंका नराखिदिनु यो अचम्म छ ।
न्यायालयको कुरा हामीले नमान्ने ? न्यायाधीशको कुरा हामीले नसुन्ने ?
तल्लो अदालतबाट मुद्दा माथिल्लो अदालतमा पु¥याउन त सकिहालिन्छ नि । निर्मलाको परिवारले न्याय पाउन मुद्दा माथि ल्याउनुपर्छ । न्याय भनेको यही हो नि । न्याय नपाउने मान्छेले ? निर्मलाको परिवारले न्याय नपाउने ? हुँदा हुँदा सुप्रिम कोर्टसम्म ल्याउनुपर्छ ।
तर निर्मलाका परिवारले भनेका छन नि–अदालतको बारेमा हामी बोल्दैनौँ भनेर ?
त्यसो हो भनेदेखि यो मुलुकको ज्यादै ठुलो घटना छ । पब्लिक इन्ट्रेस्ट लेटिगेसन (पि.आई.एल) भन्ने हुन्छ । त्यहाँका लोकल मान्छेहरू, वरिष्ठ व्यक्तिहरू, नागरिक समाजले पि.आई.एल गरेर भए पनि त्यहाँका अधिवक्ताहरू उनले यसलाई पि.आई.एल भन्ने माथिल्लो अदालतमा ल्याउनुपर्छ । मुद्दा यसरी छोड्न हुँदै हुँदैन । यसमा सरकारले पनि कसरी मान्यो ? थाहा छैन । तर माथि ल्याउनैपर्छ । त्यहाँ छोड्न मिल्दैन ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र थापा क्षेत्रीको प्रतिक्रिया आएको छ । अ’परा’धमा संलग्नलाई खोजी गर्न सहज बनाएको छ ।
कसरी सहज बनायो त ? क्लिन चिट दिने अनि पब्लिकलाई भन्ने के त ? भन्ने त्यही त हो नि । यहाँ पनि बाहिरबाट छानविन गर्नपथ्र्यो । इन्डियामा यस्तै भयो भने सि.बि.आई भन्ने हुन्छ । प्रहरीले अब जाँच अगाडि नबढाए हुँदै हँुदैन । प्रहरीभन्दा अर्कै निकाय जाँचमा जानुपर्छ ।
कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारलाई जनस्तरबाट दबाब आयो नि ?
टेस्टिङ घटाउने रे अनि संक्रमण छैन भनेर हुँदैन । सरकारले दिएको तथ्यांकमा यो त वन टेन्स पनि होइन । टेस्टिङ नगर्ने अनि छैन भन्ने, देखिहाल्नुभयो ठाउँ–ठाउँमा मान्छेहरू कसरी मर्दैछन् । यो त हेर्नुस्, सरकारले एकदम अन्याय गरेको छ । यो त गर्नै हुँदैन । टेस्टिङ अधिकतम गर्नुपर्छ । हामी सबै खतरामा परिसक्यौँ । भर्खर मेरोमा एउटा मान्छे आयो । त्यो मान्छे झापाबाट आएको हो । ८ दिन अगाडि आएको हो, कोरियाबाट आएको रहेछ । टेकु गएर टेस्टिङ गरेछ । अब उसले त्यसको रेकर्ड २२ दिन पछि पाउने रे । सरकारको यो कस्तो लाचारीपन ? यो टेस्टको रिपोर्ट २ दिनमा दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
तपाई पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको प्रसंशक हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले जे ग¥यो त्यो सही हो भन्नुभएको छ नि ? किन ?
ओलीलाई तत्काल हटाऊ भनेको छु मैले । स्थिरताको लागि काम गरिदेऊ भनेको छु मैले । १५ दिन अगाडि ओलीलाई हटाऊ भनेँ । आज ओलीलाई हटाउने कसैको तागत छैन । ओली सर्वेसर्वा भए । ओलीलाई हटाउन न माधवकुमार नेपालको हिम्मत छ, न प्रचण्डको । सुध्रिएको ओली आउनुप¥यो भनेर मैले, काँचुली फेरेको ओली आउनुप¥यो भनेर भनेको हो मैले । तर अहिले अर्को विकल्प छैन ।
त्यसो भए ओलीको विकल्प छैन अहिले देशमा ?
असम्भव । कहाँको विकल्प छ ? स्थायी समितिको बैठकले केही गर्न सक्यो त ? ओलीलाई आज खत्तम पार्न सक्ने् कसैको हिम्मत, तागत छैन । त्यसैले अब दुई अढाई वर्ष बाँकी छ, स्थायित्व चाहियो । ओली सुध्रिएर आउनुप¥यो भनेर मैले भनिरहेको छु । सरकार असफलतातिर गईरहेको छ । काठमाडौँ खाल्डो जुन छ, यो एकदमै असुरक्षामा परेको छ ।
केपी शर्मा ओलीलाई हटाउनको लागि प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालहरूले सक्नुहुन्न भन्ने तपाईहरुको दाबी हो ?
सकेनन् नै । एकजनाले भने, तत्काल दुई ठाउँबाट राजीनामा दिनुस् भनेर, सचिवालयमा भने, स्थायी समितिमा भने । माधव नेपालले कुनै एउटा पदबाट हट भने, खोइ त केन्द्रिय समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । खोइ त हटाउन सके त ? सक्दै सकेनन् । यिनको तागत छैन हटाउने । त्यसैले मैले भनेँ, ओलीको विकल्प ओली नै छ अब । हामीले भोग्नप¥यो ओलीलाई, त्यसको उपाय छैन तर सुध्रिनुप¥यो ओली ।
दलहरूको बीचमा द्वन्द्व, विवादहरू बढिरहेको छ आन्तरिक रूपमा । नेपाली कांग्रेसभित्र पनि आन्तरिक किचलो देखियो । के कारणले ?
हाम्रो देशमा गणतन्त्र, संघीयता आयो । दलका नेताहरूले राम्रो काम गर्लान् भनेर जनताले एकदम मनदेखि नै दलहरूलाई साथ दिएको होईन ? तर आज जनता जहाँको तहीँ छन् ? के भन्नुहुन्छ ?
जनतालाई यी बेवकुफहरूले बिर्से । यिनीहरूबाट हामीले कत्रो आशा ग¥यौँ । तर आफ्नै स्वार्थमा चाहे कांग्रेस पार्टी होस्, चाहे कम्युनिष्ट पार्टी होस्, जुनसुकै पार्टी होस्, आफ्नो दुनो सोझ्याउदै हिँडे । हामी जनता तपाई र मलाई यिनीहरूले बिर्सिदिए । यिनीहरूलाई मुलुकको त विचार नै आएन । त्यसैले जनता दुःख पाउने अवस्थामा छौँ । यो याद पक्का गर्नुहोला ।